Sida loo abuuro xisaab bilaash ah Muuqaalka Muuqaalka talaabo talaabo ah | Wararka Gadget
Sida loo abuuro koontada Muuqaalka
Ma xasuusataa sanadihii Rasuulka? Hubaal qaar mayllo Ma garanaysid waxa aan uga jeedo kaliya isticmaalka erayga "Messenger", laakiin sannado ka hor waxaa jiray hal heer sare oo ahaa Microsoft's MSN. Sidoo kale sanado badan kahor waqtiyadii aan kuligeen wada yeelanay @hotmail emaylka, laakiin hadii domainkaas qaaska ah uusan udhaafin si lamid ah mid kamid ah badalkeeda, @live, waa iyada oo la sii wado ka faa'iideysiga jiidashada. Dabcan, haddii hadda aan dooneyno inaan mid yeelano koontada boostada ka socota Microsoft waa inaan ogaanno sida loo sameeyo akoon Muuqaal ah.
Ku sii wadida xoogaa taariikh ah, sannado ka hor, Muuqaalka wuxuu ahaa aaladda boostada, kalandarka iyo qalabka xusuus-qorista, sida haddii ay ahayd ajende, ay Microsoft ku dartay tan iyo intaan la sii deyn Windows 3.11. Waqti dheer ka dib, imaatinka Gmail wuxuu sababay in isticmaaleyaal badani ay dhinac iska dhigaan soo jeedinta Microsoft oo ay bilaabaan adeegsiga Google, sidaa darteed shirkadda hadda maamusha Satya Nadella waxay go’aansatay inay iyagaba iskaa u sameysato wajiga. Natiijada horeyba waa loo yaqaan: Skype oo lagu beddelay Messenger iyo Muuqaalka waa "hotmail cusub." Qormadan waxaan ku sharxi doonnaa wararka ay Microsoft soo bandhigtay markii ay sameyneyso isbeddelada ugu dambeeyay uguna muhiimsan, waxaad baran doontaa sida akoon looga sameysto Muuqaalka bilaashka ah.
1 Sida loo sameeyo koonto Muuqaalka bilaashka ah
2 Liiska xulashooyinka Muuqaalka
3 Sida loo tirtiro koontada Muuqaalka
Sida loo sameeyo koonto Muuqaalka bilaashka ah
Caqli ahaan, marka Hotmail la waayo, waa inaan ka helno adeegga cusub bog kale. Si looga fogaado jahwareerka, waxaan si faahfaahsan ugu socdaa talaabooyinka la raacayo koonto ka sameyso Muuqaalka:
Waxaan riixnaa CADADKA. Sida hab kale, haddii ay dhacdo in cinwaanku is beddelo, waxaad geli kartaa Outlook.com oo waxaad geli kartaa sanduuqa boostada.
Waxaan ku dhejinay magaceena iyo magaca awalka *.
Hoosta sanduuqa "Username", guji "Hel cinwaan emayl cusub."
Haddii aan rabno, waxaan beddeleynaa bogga, kaas oo aan ku dooran karno es (haddii aad ka sameyso Spain), outlook.com o hotmail.com.
Waxaan galnaa erayga sirta ah ee aan ku gali doonno koontada aan abuuri doonno, hal mar si aan u qaabeyno iyo mar labaad oo aan u xaqiijino.
Waxaan sidoo kale soo bandhignaa wadankeena ama gobolkeena *, taariikhda dhalashada * iyo jinsiga *.
Waxaan sidoo kale u baahan doonnaa inaan qaabeyno qaab aan ku soo ceshano lambarkayaga sirta ah. Waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato cinwaan kale oo e-mayl ah si aad uga fogaato inaan ku siino lambarka taleefankeena. Dabcan, haddii aad rabto inaad tirtirto koontada ama aad dib ugu soo ceshato luminta lambarkaaga sirta ah, waa inaad isticmaashaa emayl ama taleefan dhab ah.
Hadda waa inaan xaqiijinnaa inaynaan ahayn robot, sidaa darteed waxaan ku qori doonnaa qoraalka aan ku aragno sawirka sanduuqa. Waxaan leenahay ikhtiyaarka aan ugu beddeleyno cod haddii loo baahdo.
Waan ogolaan karnaa dalabyo xayeysiis ah in nala soo diro, laakiin waxaan kugula talinayaa INAAD sanduuqaas calaamadin. Marwalba waxaan ku fikiri jiray haddii aan wax doonayo, inaan daryeelo raadinta. Ma doonayo warqad aan la weydiisan karin.
Waxaan gujinay «Abuur xisaab».
Hadda waxaan gujineynaa sanduuqa oo ka kooban sagaal sanduuq ka dibna Muuqaalka.
Ugu dambeyntiina, waxaan muujineynaa luuqadeena, aaggeena waqtiga waxaanna gujineynaa "Badbaadinta".
(*) Muhiim ma aha in la dhigo xog dhab ah.
Sidaad arki karto, waana sababta aan awalba Gmail ugu magacaabay, Muuqaalka Muuqaalka ayaa aad u fiicnaaday marka loo barbar dhigo kii hore ee Hotmail waana mid dareen badan leh. Dhinaca bidix waxaan ku leenahay sanduuqa 'Inbox', fayllada 'Spam' (oo xitaa ikhtiyaar u leh inay ka saarto diiwaangelinta macaamiisha kale ee e-mailka ah aysan haysan), Qarsoodi, Alaab la diray iyo Waxyaabo la tirtiray, iyo sidoo kale Skype Xiriirada. Haddii aan dooneyno inaan abuurno galka, waxaan dul wareegeynaa qoraalka "Folders", waxaan gujineynaa calaamadaha lagu daray (+) waxaanna magac ku dhejinaynaa sanduuqa ka muuqan doona hoosta fayllada jira. Laga soo bilaabo "Cusub", waxaan ka abuuri karnaa emayl ama, haddii aan gujino fallaarta yar, dhacdo taariikheed.
Liiska xulashooyinka Muuqaalka
Liiska xulashooyinka Outlok waxaan ka helnay:
Cusboonaysiinta, si loo cusbooneysiiyo fariimaha.
Jawaab otomaatig ah. Waqtiga la qorayo qoraalkan, waa la fasaxay, laakiin waxay u adeegi doontaa inay ka jawaabto emayllada annaga (anigu tan ma jecli gabi ahaanba).
Dejinta shaashadda waxay naga caawin doontaa inaanu qaabeyno sida aan rabno inaan u aragno sanduuqa.
Maaree waxyaabaha kujira, si loo maareeyo qaar ka mid ah adeegyada Microsoft.
Qalab qadla'aan, inaan awoodno inaan adeegsanno qalabka markii aan ku xirnayn internetka.
Beddel mawduuca, Waxaan u maleynayaa inay taasi cadahay. Waa in la beddelo mowduuca sanduuqayaga iyo adeegyada kale.
fursadaha, si aad u aragto dhammaan xulashooyinka loogu talagalay Muuqaalka iyo adeegyada kale ee Microsoft. Ma jiraan wax la xiriira koontada Microsoft oo halkan laga dejinayo.
Haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan bedelno muuqaalka astaanteenna, waa inaan gujinnaa astaamaha ku yaal dhinaca midigta kore, aan dooranno "Tafatir astaan" ka dibna dhagsii beddelka sawirka, halkaas oo aan ka dooran karno sawirkeenna oo aan ka soo dejin karno
Sida loo tirtiro koontada Muuqaalka
Haddii, sabab kasta ha noqotee, aad go'aansato inaadan mar dambe rabin inaad isticmaasho koontadaada Muuqaalka, waa inaad xirtaa koontada oo dhan, sidaa darteed hadda ma awoodi doonno inaanu helno mid ka mid ah adeegyada Microsoft koontadaas. Haddii ay tahay waxa aad rabto, waa inaad raacdaa talaabooyinkan.
Aynu aadno xiriiriyaha Xidh koonto.
Haddii nala waydiiyo inaan galno ama aan xaqiijino koontadayada, waxaan raacnaa tilmaamaha.
Wuxuu na weyddiin doonaa inuu caddeeyo inaan nahay annaga. Haddii aan dirno emayl, waa inaan sheegnaa emaylka labaad ee aan qaabeyno. Hadday taleefoon ahaan lahayd, waan kuu sheegi doonnaa oo waxay noo soo diri doonaan lambarka taleefanka.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la hubiyo waxa ay noo soo direen oo la geliyo lambarka (oo aanan sameyn karin maxaa yeelay koontada emayl ee aan ku hagaajiyay tilmaamahan ayaa been ahayd. "Toos" walxaha.).
Liistada hoos-u-dhaca "Dooro sabab", waxaan dooranay sabab aan u dooneyno inaan xirno koontada. Haddii aynaan rabin inaan waqti ku lumino, waxaan u dooran karnaa mid si kadis ah.
Ugu dambeyntiina, waxay noo geyn doontaa daaqad cusub oo aan ku xaqiijin doonno inaan dooneyno inaan tirtirno koontadeena adigoo gujinaya "Calaamadda xisaabta si aad u xirto".
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan sida loo abuuro koonto Muuqaal?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Sida loo abuuro koontada Muuqaalka
maker javier zambrano dijo
Waan jeclahay muusikada
Ku jawaab maiker javier zambrano
6 talo si aad u hesho ama u wanaajiso caymiskaaga moobiilka
Sida loo badbaadiyo nolosha taleefankaaga casriga ah markii uu qoyo